downloads 14 836
Anya na FS9 Bell Aircraft
Nke a bụ Super-copter si ama TV usoro: codename AIRWOLF. Nnọọ mfe ma na a pụrụ iche livery. Funny n'ihi ụda nwere ndị nke TV usoro.
Airwolf bụ ihe American telivishọn usoro nke 80 ji nke 50 nkeji kere Donald P. Bellisario na aired n'etiti January 22 1984 na March 29, 1986 on CBS na n'etiti 23 January 1987 na August 7, 1987 on USA Network.
Na France, usoro e aired site 21 April 1986 na ọwa La Cinq, na e ohuru na Virgin 17 (now DirectStar).
Onye edemede: Ihe ngosi dans FS9 Aircraft Bell